Mpiara-mianatra matetika any am-pianarana. Ao no mihinana, milalao, miala voly, mivoatra. Noho izany, ny efitrano misy ny ankizy dia tokony ho tsara sy mahafa-po araka izay azo atao.
Ny fanoratana ny toeram-ponenan'ny vondrona ao amin'ny akanin-jaza dia ampahany manan-danja amin'ny fizotry ny fampianarana manontolo. Mikasika ny fomba amam-panaovana ny ati-trano dia miankina amin'ny fivelaran'ny artista sy ny aesthetic ny ankizy, ary koa ny toetry ny psyphysiolojika.
Inona no tokony hoeritreretiko rehefa misoratra anarana vondrona any amin'ny toeram-pambolahy aho?
Rehefa mamorona ny ati-trano dia tokony horaisina ny toetra mampiavaka ny taonan'ny ankizy. Isaky ny vanim-potoana dia misy ny asa fanabeazana azy ireo. Ankoatra izany, ilaina ny mandray ny haben'ny efitrano, ny endri-piainany ary ny tahiry misy.
Ny fanampiana tsara amin'ny famolavolana ny vondrona dia mety ho vonona ny manda. Ireo Templates dia azo jerena ao amin'ny Internet na atao amin'ny baiko. Ireo seza ireo dia tena tsara ho an'ny asa - afaka mitahiry rakitra momba ny sakafo ho an'ny andro na ny fahazarana isan'andro amin'ny ankizy, lisitra vondrona, fampahalalana mahasoa ho an'ny ray aman-dreny.
Ny lanjany lehibe dia ny lokon'ny efitra. Ny endriny voalohany amin'ny vondron'ny zaza kamboty dia maivana sy manankarena.
Ao amin'ny safidy ny fanaka dia tokony hanaraka ity fitsipika manaraka ity: ny kely kokoa, ny tsara kokoa. Ny ankizy dia mety hanana toerana lalao lehibe kokoa.
Ny habetsaky ny vondrona dia tsara indrindra mizara lalao sy asa (ho an'ny fanabeazana). Ary efa manomboka izany, hanamboatra ilay toerana.
Ny endriky ny taona sy ny endriky ny atin'ny vondrona ankizy
Rehefa misoratra anarana ny vondron'ny taranja zana-pokontany ao amin'ny akanin-jaza dia tokony hapetraka eo amin'ny kianja filalaovana ny fanamafisana. Zava-dehibe ny fananana ankizy amin'ny toeram-pivarotan-jaza sy ny fanaka mozika. Azonao atao koa ny mandamina ny zana-kisoa miaraka amin'ny fitaovana sy kilalao sasany. Ho an'ny zazavavy dia mety ho "Shop" na "Kitchen". Ho an'ny ankizilahy - "Garage", "Workshop", sns.
Ny ankizy manan-danja dia ho zarain'ireo lohahevitra na sarimihetsika malaza.
Ho faly ny ankizy ao amin'ny tarika zandriny any amin'ny akanin-jaza raha toa ka ny endriky ny efitranony dia ahitana sarin'olona maherifon-tantely mahafinaritra amin'ny endrika appliqués na stickers.
Ny fitomboana manan-danja eo amin'ny sehatry ny asa dia tokony hojerena eo afovoan'ny vondrona eo afovoany. Ny fanoratana ny vondron'olona miditra ao amin'ny akanin-jaza dia bokin-tsoratra sy matematika, kalandrie natiora. Ankoatr'izany dia mety misy faritra ara-batana, mozika ary teatra.
Ny fandaharan'asan'ny tarika zokiny dia mikendry ny hanomana ankizy ho any an-tsekoly. Noho izany, amin'ny fandaminana ny efitranon'ny tarika zokiolona sy ny fiomanana amin'ny sokajy jadona, dia tokony hapetraka eo amin'ny sehatry ny fampianarana ny fanamafisana. Voalohany indrindra, ireny dia latabatra, birao, kabinetra misy kilalao famolavolana, boky ary fitaovana.
Ny fanoratana ny vondrona ao amin'ny kolejy dia lasa asa mahafinaritra raha mandray anjara amin'izany ny ray aman-drenin'ireo mpianatra ankoatra ireo mpanabe. Fifanakalozan-kevitra toy izany no miteraka hevitra mamorona, ary ny ray aman-dreny manokana dia mamorona sangisangy sy manga iray ho an'ny zanany. Ny hevitra ho an'ny famolavolana vondron'ny zaza madinika dia mety ho hafa tanteraka. Azonao atao ny misafidy sehatr'asa marin-toerana, sehatra, fehezanteny na ala. Ara-dalàna raha ny endriky ny tarika madinika ao amin'ny taranja jadona, ary ny fifandimbiasana safidy hafa. Ny zavatra rehetra dia tsy miankina afa-tsy amin'ny fitaovana misy sy ny eritreritrao.
Ny kindergarten no olom-pantatra voalohany amin'ny ankizy iray manana toeram-pampianarana. Noho izany, tena zava-dehibe ny hamolavola ny endriky ny tarika jadona ary mahafinaritra. Mendrika ny hametraka ezaka kely sy eritreritra kely fotsiny - ary ho sambatra ny zanakao. Kanto ny fomba fijery sy ny fisainana mahatalanjona!
Hygiène ny ankizilahy
Ahoana ny fomba ampianarana ny ankizy hilomano?
Ny fampandrosoana lahateny amin'ny zaza 3-4 taona
Ny asa tanana avy amin'ny taratasy fidiovana
Ahoana no hankalaza ny zaza 2 taona?
Fetin'ny 1 Septambra
Sweets ho an'ny ankizy madinika
Inona no azonao atao amin'ny tananao manokana ho an'ny ankizy?
Akanjo avy amin'ny rakotra plastika
Fampandrosoana ny kognitive ny voromailala
Bibilava eo amin'ny lohan'ny zazakely
Tombontsoa: Kim Kardashian amin'ny sehatra manokana
Ahoana ny fomba hanomezana sakafo ny bitro - torohevitra tsotra ho an'ny mpamboly saka mpihinana
Ahoana no ahafahan'ny ankizy manao lesona?
Enterococci amin'ny fefin'ny zazakely
Gout - fitsaboana amin'ny dokotera
Loko hosasana ho an'ny lakozia - fomba hisafidianana safidy tsara indrindra ho an'ny fikarakarana azo antoka
Ahoana ny fomba fanaovana taratasy hosodoko?
Fytir amin'ny Egyptiana
Inona no tsy vitan'ny vehivavy bevohoka?
Ahoana ny fomba hanatsorana ny henan'akoho ao anaty vilany?
Britney spears ny fofona
Sehatry ny India
Herinandro maoderina amin'ny fararano